Kwakuvamile ukuba phakathi uhambo suburban kuyadingeka ukuze umlilo. Kodwa indlela wokhela umentshisi ngaphandle ibhokisi? Sinikeza khumbula amathiphu abahambi, usebenzisa okuyinto uyokwazi ukuhamba ngaphandle kokwesaba okokuqandisa noma baphelelwe ukudla okushisayo.
Indlela kokhela umdlalo
Uma ibhokisi kwaba umdlalo oyedwa kuphela, indlela wokhela umentshisi ngaphandle ibhokisi? Akubona bonke bazokwazi ukuzalela ngosizo umlilo agcwele. Ukuze uphume kulesi simo sidinga amakhono athile.
Iziyalezo elivuthayo umlilo komunye umdlalo
Uma Ibhokisi likamentshisi usemanzi, ukuthi imayelana wokhela umentshisi? Noma, kuthiwani uma lulahlekile ibhokisi, kanye kuphela kakhulu umdlalo? Esikhathini zezingane ikhathuni namaqhawe ukunikela ukusebenzisa fuse dynamite, kodwa ekuphileni kwangempela le kungenzeka neze. Ukwakheka umdlalo ikhanda amakhemikhali ezifana ammonium nitrate, isibabule, ne phosphorus kwakwakhe. Lezi izinto abe omlilo lokushisa ongaphakeme. Ukuze ukufanisa zikhanyiswe, imali ezincane ukushisa liyadingeka. Yisiphi iseluleko esiya izivakashi ngubani amaphupho ukuthola umthombo ukushisa omdlalo, unganikeza? Bheka indawo ecishe ifane by bezihlikihla efudumele up ukufana ikhanda. Kodwa indlela enjalo has izici zayo siqu. Found ebusweni anolaka kufanele kube okuncane. Kungenjalo, ikhanda awe ukufana wonke amakhemikhali, akukho ilangabi livela. Ebusweni metal - ekahle ukuhilizisana. Ngokwesibonelo, imbazo, isando, insingo ummese ingasetshenziswa umdlalo ikhanda gaphambi. Kukhona lezi zimo ezintathu:
base lokhuni fly Ukwakheka kwamakhemikhali.
Lokho isimo isixazululiwe esivuna yakho, kumelwe sithathe isinyathelo ngokushesha, kodwa ngokucophelela. Amandla ngawo bazocula ukungqubuzana akumele ukuthi ibe nkulu kakhulu.
Uma uya ku-zasehlobo ezifudumele, okuthi uma sezomile futhi zikhululekile, asivelanga awunankinga komlilo. Vele ukuthola umdlalo ukhanyise ku ebhokisini noma phezu anolaka. Lapho isimo sezulu uba manzi futhi kubanda, kuphakama umbuzo yemvelo - indlela wokhela umentshisi ngaphandle kwebhokisi. Ukuze umlilo ku uhambo amatende kudinga izinto ezilandelayo: izinkuni, izinkuni chips noma amagxolo ukuze elivuthayo, olufana.
Ngakho, komlilo imfundo izimo mkhakha.
Ngaphambi kokuthatha uhambo, sicela elivuthayo (birch namagxolo, iphepha ezomile, ezincane chips izinkuni). I ekahle kungaba sibeke Ibhokisi likamentshisi esikhwameni angangenwa manzi plastic ukuvimbela kubakhandele ezimanzi ngesikhathi somkhankaso. Ngaphezu kwalokho olufana, kuyinto efiselekayo ukuletha igesi travel lula, uthathe amafutha ezomile. Kukhona izivakashi okufanayo ekhethekile. Uma kukhona ngeke unombuzo njengoba ukuze kuvuswe ukufana ngaphandle kwebhokisi. Beginners izivakashi uqiniseka ukuthi iphepha iyona engcono "fuse" ngoba komlilo okusheshayo. Empeleni, lokhu akunembile. Iphepha ukusha ngokushesha kakhulu, ukhuni akanayo isikhathi ukuxoxa nabo izinga lokushisa ukuthungela. Kungcono ukusebenzisa njengoba elivuthayo ezomile amagatsha ngesihlahla sonwele; behlala ezomile ngisho ngesikhathi imvula ukukhanya. Ifanele njengoba material for umlilo futhi fir amagxolo: it has a lot of kuzilandeleli, uzovutha ngokukhazimulayo isikhathi eside.
Ukuze ushaye ukufana ngaphandle ibhokisi, kufanele ngisebenze kanzima ukuze. Kungcono ukugwema izinkathazo ezinjalo, futhi ube 2-3 iimbumbeko Reserve. Ukuze kuqubuka umlilo, kumele eyakheke kahle. Ukuqala elivuthayo embondelene ke - amagatsha nomzimba omncane, izinti. Izinkuni kungenziwa eligoqiwe ngezindlela ezimbili: ngesimo kahle noma itende. isitayela okunjalo ikuvumela okhela umlilo agcwele ngaphandle kwezinkinga. Letha i-Ukuqala umdlalo, bese bezithola Amahlumela ezincane, futhi kubo - izinkuni.
Umlilo ngaphandle ukufana
Izivakashi ukubuza ochwepheshe, indlela wokhela umentshisi ngaphandle kwebhokisi. Kungenzeka yini ukuba nibase umlilo ngaphandle okufanayo? Iyatholakala kukhona Ibhokisi likamentshisi, kodwa kukhona Flint? inhlansi wakhe kungaba okhela zikabhabhulini fluff, dandelion, amagxolo mncane. Winter umlilo, umlilo esikhathini eluhlaza kungenziwa buhlanjululwe, ayehlome utshwala ezomile. Okokuqala, yilungiselele phansi, ngalo ozokwakhela kulo umlilo. Ukuze flooring efanelekayo ahlabayo Plexiglas noma irabha. Lapho ashisiwe, lezi izinto ezikhishwe intuthu okubabayo, ngakho sebenzisa indlela efanayo kungaba kuphela ezimweni eziphuthumayo. Ngo ezinzima kakhulu umlilo ngophethiloli. Gasoline - uketshezi oluyingozi kakhulu, ngakho ingozi eliphezulu yokuthola kwalo ku izingubo womuntu. Ngenxa yalokho, it kwandisa amathuba ukusha. Kuyadingeka ukuba uthele uphethiloli kusukela ibhokisana lokugcina itiye noma ikhofi kuphela isiqondiso somoya.
Abafundi abakhetha uhambo amatende, ungakhohlwa mayelana imithetho yokuphepha umlilo. Abanye abanesifiso futhi ukuthi wokhela umentshisi ngaphansi kwamanzi ngangokunokwenzeka? Isayensi unika lo mbuzo okungekuhle. Ngaphandle oksijini, amandla omlilo akunakwenzeka. Ungakhohlwa ukuthi umlilo kwesokunxele ehlathini zingagadiwe, kungaholela imililo sina. Ngaphambi ushiya ehlathini, qiniseka ukucima uwathele ngomhlabathi, isihlabathi.
"Ibhasi 99. ru": Izibuyekezo ikhasimende mayelana esitolo
Minvata Knauf: incazelo, imininingwane kanye nokubuyekezwa
Camus ' "Isihambi": isifinyezo. Alber Kamyu, "I Inyumbazane": ukuhlaziya